लोकतन्त्रकाे १४ वर्षः उपलब्धि के ? (अडियाे सहित) – Online Jagaran
सुर्खेत, ११ (जागरण) । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भइ लोकतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पुगेको छ । संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गतेको बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनाएको थियो । वैशाख ११ गतेको जगमा देशमा ठूला परिवर्तन भएका छन् ।
संविधानसभाबाट बनेको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्म्निरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेका छन् ।
यसैविच हामीले राजनितीक विश्लेषक तथा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतका अधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरसँग कुराकानी गरेका छौँ । उहाँलार्य सहकर्मि नन्द कठायतले लोकतनत्र स्थापना देखी अहिले सम्म के के उपलब्धि भयो ? भनेर सोध्नुभएको छ । प्रश्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानी ।
कर्णालीको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव
कालो बजारी नगर्न स्थानीय प्रशासनहरुको चेतावनी
२६ बैशाख २०७८, आईतवार १३:४२ May 9, 2021 जागरण
२८ भाद्र २०७६, शनिबार ०६:४७ September 14, 2019 जागरण